अराजक वडा अध्यक्ष: संक्रमित भएर गाउँघर डुल्दै ! - KalaiyaOnline.Com
तपाईको गाँउ टोलमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको व्यक्ति हिँडडुल गरे प्रहरी वा जनप्रतिनिधिलाई खबर गर्नु हुन्छ होला हैन ? तर, बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर १० का संक्रमित जनप्रतिनिधि नैं बेकारमा गाउँघर डुल्दै हिँडे पछि स्थानीय आतंकित बनेका छन् ।
त्यहाँका वडा अध्यक्ष पदम बहादुर मोक्तान कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पनि व्यक्तिगत कामले गाउँ डुलिरहेको पाइएको छ । बिहान बिहान दुध बेच्न पनि आँफै डेरी पुग्छन् । त्यहाँ उनी संक्रमण भएको बारेमा सोध्दा टाईफाइड भएर निको भईसकेको बताएको स्थानीय बताउछन् ।
त्यस पछि उनी चिया पसल पुग्छन् । चिया खान जम्मा भएर बसेका स्थानीयको बिचमा पुग्छन् । चिया मँगाएर खाएर हिड्छन् । कोरोना बारेमा सोध्दा आफुलाई ठिक भईसकेको बताउछन् ।
वडा अध्यक्ष मोक्तान लक्षणसहिँतको कोरोना संक्रमित हुन् । उनी बिरामी भएर औषधी समेत सेवन गरेका थिए । उनको निजगढमा शुक्रबार गरिएको स्वाव परिक्षणमा कोरोना पोजेटिभ रिर्पोट आएको निजगढ नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा अधिकृत मणिश्वर घिमिरे जानकारी गराए ।
वडा अध्यक्षको अराजक शैलीले स्थानीयवासी त्रसिद भएका छन् । कोरोना मुक्त नहुँदै पसलमा गएर चिया मगाएर खाएको स्थानीय माया लिम्बुले बताईन् । उनले कोरोना संक्रमण भएको व्यक्ति गाउमा अनावश्यक काममा डुल्दा गाउँमा त्रास फैलिएको बताईन् ।
सोहि वडाका सदस्य जमान सिंह घलानले कोरोना संक्रमित भएको व्यक्ति गाउँमा हिड्दा गाउँमा त्रास फैलिएकाले घर मैं बस्नु पर्ने बताउछन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता कुमार मुक्तानले कोरोना संक्रमित वडा अध्यक्ष नैं लापरवाही गर्दा अचम्म लागेको बताए । उनले नगरपालिकाका मेयर सुरेश कुमार खनाल र स्वास्थ्य संयोजक रमेश लामालाई जानकारी गराउँदा समेत कुनै वास्ता नगरेको बताए ।
जिल्लामा ९ जना महिला र ३६ जना पुरुष गरि ४५ जना संक्रमितहरुले ज्यान गुमाईसकेका छन् । भने ९७७ जना संक्रिय संक्रमितहरु रहेका छन् ।
निजगढ नगरपालिकाले महिलाहरुकोलागी प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सम्बन्धमा जनस्तरमा सचेतना गराईरहेकोछ । निजगढका मेयर सुरेश कुमार खनाल सहितको टोलिले नगरका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर महिला प्रजनन स्वास्थ्य